Vista's Colorful Planet: Flamingos
They remind me of long legged models ....
Which camer are you using?
ဗစ်ရိုက်ထားတာလား တော်တယ် လှတယ် နောက်လည်းများများတင် အားပေးမယ်
ကြိုက် ခိုက် မိုက်..
ဘယ်မှာ ရိုက်ထားတာလဲ။ Bird Park မှာလား။ :-?
ရွာသားရေ Nikon Coolpix P90 ပါ ..
ထော ကျေးဇူး ..
thandar kyaw thanks !
ကို ZT ဟုတ်ပါတယ် Bird Park မှာပါ
ကြည့်တော့လှတာ တော်တော်နံတယ် အနားမသွားနိုင်ဘူး
ဗစ်ရေ လှတာကွယ် အဲ့ငှက်တွေကို တော်၂သဘောကျတာ ကင်မလာကောင်းထှာ ရွာသားလေးတောင် မေးယူရတယ်
တို့ လည်း ရိုက်ပေးပါ အဲ့ကင်မလာကြီးနဲ့အဲ့လိုလှအောင် (ငှက်တော့မဟုတ်ဘူး တို့ က)
ဒီတခါ ကောင်းကောင်းမန့် ပါတယ် (ကင်မလာကြီးနဲ့ လှအောင်၇ိုက်ပေးမယ်ထင်လို့ )
အောက်က ပုံလေး အရမ်းကြိုက်လိုက်တာ၊
date stamp မဖြုတ်ချင်ဘူးလား?
မိုးဦးဝင်ရောက်လာတဲ့အခါ ရိုးမကို ဖြတ်ပျံရင်း...
မြောက်ဘက်ကို ဦးတည်လှည့်ကာ သားဖောက်ရာအရပ်ဆီ မိုင်ထောင်ချီပျံလေပြီ...
ကြိုးကြာငှက်တို့ရဲ့ မိုင်ထောင်ချီ ခရီးစဉ်...
ဒီမှာကတော့ပုံပဲရှိတယ် ကဗျာလည်းမတတ်စာလည်းမတတ် ဟိဟိ